Banky Foibe : rahonana fandroahana ny mpiasa (+vidéo)
Nanomboka androany, ary ao anatin’ny fotoana tsy voafetra, ny fitokonanan’ny sendikan’ny mpiasan’ny Banky Foiben’i Madagasikara. Rehefa nanaraka ny lalàna velona rehetra mikasika ny zo sendikaly ny mpitarika dia tonga eo amin’ny fotoana tsy ahafahan’izy ireo mifampidinika amin’ny mpitantana intsony. Na dia efa nampandrenesina aza mantsy ny mpitantana dia nanao be marenina ka efa dila ny fotoana 72 ora voafetran’ny lalàn’ny asa ifanantonan’ny sendika sy ny mpitantana vao nampiantso fivoriana izy ireo. Nambaran’ny SEHMBIOSE tamin’izay ary fa « dila ny fotoana ka aoka ny mpanelanelana no hiasa ». Efa mihoatra ny mety manko, araka ny fahitan’ny mpitarika ny sendika, ny famoretana mpiasa ao amin’ity andrim-panjakana ity. Androany maraina ohatra dia efa norahonan’ny mpitantana ho roahina avokoa izay rehetra manaraka ny hetsiky ny SEHMBIOSE.
Raha tsiahivina dia mifototra tanteraka amin’ny fampanajana ny sata mifehy ny BCM sy ny fanajana ny lalàna velona mikasika an’ity banky ity ny fitakian’ny sendika. Eo ihany koa ny fampitsaharana ny famindran-toerana miendrika sazy sy ny antsojay isan-karazany atao amin’ny mpiasa. Notsiahivin’ny sekretera jeneralin’ny SEHMBIOSE androany fa vao nijoro ny sendika ka nampahafantarina ny mpitantana ny fisiany dia « mise à pied » avy hatrany no azony sy ny filohan’ny sendika. Fepetra izay, araka ny fanazavan’ny mpitantana, noraisina araka ny sata mifehy ny mpiasa izay tsy mbola nahazo ny fankatoavan’ny « inspection de travail » akory.
SEHMBIOSE.pdf 795.04 Ko
Tontolon’ny fitsaboana : notokanana ny kianjan’ny "profesora Baomba" (+vidéos)
Nahazo fahafahana vonjy maika ny filohan’ny sendikan’ny mpitsabo mpanampy rehefa niatrika ny fampanoavana androany. Ny 11 jolay hoavy izao no hiatrika ny fotoam-pitsarana ny tenany. Namonjy ny tolona avy hatrany izy raha vao vita ny fitsarana ary mbola nifanome toky tamin’ny mpikatroka rehetra fa tsy hamela ny tolona tsy akory. Nambarany kosa anefa fa laviny marindrano ny filazana fa nandà ny tsy hikarakara ireo maratra avy tany Mahamasina ny tenany. « Tsy nahalala ny fisian’ireo akory ny tenako » hoy hatrany Valérien « satria vao nivoaka avy nivory ».
Sary HJRA androany
Ho fanamarihana ny herisetra natao tamin’ny mpitsabo mpanampy sy ny fanosihosena ny tontolon’ny fitsaboana ary dia notokanan’ny mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy ho « kianjan’ny profesora Baomba » ny fiantsonan’ny fiara manolaoana ny « service des urgences » ao amin’ny HJRA. Ity jeneraly iray ity mantsy dia miseho tapi-pahaizana loatra raha ny fiteniny amin’ny hainoamanjery hany ka zary manambany ny fianarana nataon’ny mpiasan’ny fahasalamana sy ny fahaiza-manao ananan’izy ireo.
Miantso ny fandraisan’andraikitra avy amin’ny ministeran’ny fahasalamana ny mpitsabo mpanampy amin’izao raharaha Valérien izao. Toa mahatsiarotena tsy manana mpiahy mantsy izy ireo na dia misy idiran’ny ministera mpiahy aza ny fisamborana sy izay rehetra mety mbola tohin’ny raharaha. Manantena kosa anefa ny filoha izay nosamborina fa efa mikatsaka ny fiovana ihany koa ny tontolon’ny fitsarana ka tsy hanaiky baiko mitanila fa hitsara ara-drariny. Ankoatra izay dia tsy hitsahatra akory ny fitakiana ary hiara-dia manomboka eto ny mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy. Notsindrian’izy ireo ihany koa fa manohana manontolo ny tolon’ny mpiasam-panjakana Malagasy ny avy amin’ny tontolon’ny fahasalamana.
Mpitsabo mpanampy :
Mpitsabo sy mpitsabo mpanampy : « bôty no eo ambony lohanay ! » (+vidéos)
Iray andro izao no nitanana vonjimaika ny filohan’ny sendikan’ny mpitsabo mpanampy. Ora enina taorian’ny nisamboran’ny Jly Baomba azy tany anaty hopitaly vao fantatry ny namany fa any Betonglo i Valérien izay filohan’ny sendikan’ny PARAMED. Raha ny fampitam-baovao nataon’ny mpiara-mitolona aminy dia mananosarotra ny fahasalamany amin’izao fotoana satria misy olana ny taovam-pisefoany noho ny daroka nahazo azy teo am-pisamborana. Raha ny filazan’ireo mpitsabo mpanampy dia ny Jly Baomba mihitsy no nikasi-tanana ny mpiara-miasa amin’izy ireo ary dia izao niteraka aretina ho azy izao.
Melohin’ny mpitsabo mpanampy rehetra izay mivondrona ao anatin’ny sendika ny fampiasan-kery sy fampihorohoroana natao tamin’ny naman’izy ireo. Manginy fotsiny ny fandrangarangana basy manerana ny HJRA izay toerana natokana hanafoanana ny fanaintainana fa tsy hampitombo fitaintainana. Manomboka androany ary dia natsahatry ny mpitsabo mpanampy na dia ny « service minimum » niasa teo aloha aza. Ny FATE rahateo mbola vao namitaka an’ireto PARAMED ireto indray araka ny filazan’ny tomponandraikitra.
Mampiaka-peo koa …
Tsy misy mandray marary intsony ny mpitsabo mpiasam-panjakana rehetra manomboka androany. Ankoatra ny fanaovana zinona ny fitakian’izy ireo dia fanehoana ny fanamelohana ny herisetra nampidirina tany anaty toeram-pitsaboana no anton’izao fotokonana faobe izao. Raha fitakiana am-pilaminana manko no nataon’ireo mpitsabo dia novalian’i Baomba herisetra izany. Araka ny fijoroana vavolombelona nentin’ny mpitsabo maromaro dia nataon’ny EMMOREG savahao ny HJRA nikarohany ireo mpitsabo manao fitokonana hoterena hitsabo ireo naratra tany am-pijerena baolina lavalava. Ny tena marina araka ny fampitam-baovao ihany dia nararaotina entina hamoretana ny tontolon’ny fitsaboana ny tranga teny Mahamasina. Notsorin’ny sekretera jeneralin’ny sendikan’ny mpitsabo anefa fa hain’izy ireo ny asany ary tokony hanao ny asany koa ny Jly Baomba.
Aleon’ny FATE manao fety …
Maivana lavitra noho ny fandaniana nentina nanaovana ny lampihazo « podium sy gomora » tetsy Anosy ny angatahin’ny mpitsabo folo volana lasa izao. Fandrirarirana anefa no setrin’ny fandeferana ka nilaza tsy handefitra intsony izy ireo indrindra fa mbola nampiana herisetra sy fisamborana ny mpiara-miasa aminy. « Izao ny sasany mbola mampananetana kianja manara-penitra ho an’ny rugby » hoy ny sekretera jeneralin’ny sendikan’ny mpitsabo « ary ny kianjan’ny fahasalamana izany mba ahoana ? »
Mpiasam-panjakana : « lalan’ny fahafahana » mankany amin'ny fitokonam-be
Novakian’ny SEMPAMA bantsilana teo amin’ny Kianjan’ny 90 Ariary androany ny paikady ratsy entin’ny ministry ny fampianarana sy ny FATE mampifandrafy ny samy Malagasy. Nialoha ny fanambarana ofisialy ny fanemorana ny tetiandrom-panadinana rehetra ny zoma lasa teo dia naparitaka eran’ny hainoamanjery rehetra manerana ny Nosy fa efa nijoro ny atao hoe PSAM, tahala iarahan’ireo mpanabe sy ny sendika eo amin’ny sehatry ny fampianarana rehetra. Notsorin’ny sendikan’ny mpanabe anefa fa am-pitaka no nampifanatonana azy ireo tao amin’ny lapan’ny loholana teo Anosy.
Nentina nanaovana fanapariahana vaovao tsy marina izany avy eo ka niteraka korontan-tsaina tamin’ireo mpanabe mpiara-mitolona . Androany ary dia nifanome toky indray ny mpanabe fa tsy misy fiverenana mampianatra raha tsy hita taratra ny momba ny fanomezan-kasina ny hatsembohan’ny mpampianatra sy ny mpiasam-panjakana rehetra. Nanomboka androany rahateo dia miara-dia amin’ny SEMPAMA ireo sendika maro mivondrona ao anatin’ny « cellule de crise interministérielle ».
11 jolay …
Notokanana tamin’ny fomba ofisialy androany ny « lalan’ny fahafahana » izay atokan’ny mpiasam-panjakana ho toerana fanehoan-kevitra sy fitakian-jo manomboka eto. Diabe nanomboka, teo amin’ny kianjan’ny 90 Ariary no nanamarihana izany fotoana izany. Nihazo ny fidirana teo amin’ny HJRA ireo mpikatroka ary avy eo dia namonjy ny lalana manoloana ny ministeran’ny fambolena mialohan’ny niverenana teo amin’ny kianja niaingana. Izay lalana nolalovana androany izay no natokan’ny sendikalista maro ho an’ny fahafahana ka hiainan’izy ireo ny fivoaran’ny tolona mandram-piavian’ny andron’ny 11 jolay izay hanombohan’ny fitokonana faobe iarahan’ny mpiasam-bahoaka manerana an’i Madagasikara. Ho an’ny rahampitso 04 jolay 2012 aloha dia fantatra fa ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka no hanomboka ny fitokonam-be araka ny « conclave » nataon’izy ireo. Miara-dia amin’izy ireo amin’izany ny mpandraharaha sy ny mpianatra eny amin’ny anjery manontolo izay niara-nizaika tao anatin’ny fotoana nanaovana ny « conclave » voalza etsy ambony.
Hetsika Free FM : atao haza lambo ireo mpitarika
Nokakerin’ny ambokely tiany i Lalatiana Rakotondrazafy sy Fidèle Razara Pierre androany. Raha ny fanenjehana nataon’izy ireo tao amin’ny onjam-peo Viva no nanagadrana ny mpiara-dia amin’ny Filoha RAVALOMANANA taloha dia anjaran’izy ireo no nisantatra ny fizakana ny fofona entona mandatsa-dranomaso androany. Araka ny fanentanana natao tao anatin’ny onjam-peo Free FM tao anatin’ny andro vitsy dia nikasa ny hiditra tao amin’ny Kianjan’ny demokrasia koa izy mianadahy sy ireo mpanara-dia azy androany saingy tsy tanteraka izany. Vao maraina dia efa tomefy hery famoretana teny Ambohijatovo ary tsy nivonona ny hanokatra ny kianja velively.
Nisy ny fifandraharahana indroa miantaona nataon’ireo mpiara-dia amin’izy miandahy saingy nandamoka hatrany izany. Tamin’ny roa ora sy sasany tolakandro tany ho any vao nigadona teny an-toerana i Fidèle ary nandray fitenenana fotoana fohy. Nahatsiaro voafitaka anefa ireo mpanara-dia azy rehefa nilaza ny hijaona teo amoron-dalana ity mpanentana ity ary dia tsy nanaiky izany ka nirohatra hamonjy ny Kianjan’ny Demokrasia. Teo no nanomboka ny tifitra grenady vary raraka ary dia rifatra nandositra ny mpanao fihetsiketsehana. Raikitra ny fifanenjehana sy ny sakana isan-karazany. Vokany dia efatra no nambaran’ny HJRA fa naratra nandalo tao amin’izy ireo ary 11 voasambotra ka ny dimy mbola notazomina taorian’ny famantarana ny momba azy ireo. Araka ny filazan’ny Jly Baomba dia teknisiana ao amin’ny Free FM ny iray izay ampangaina avy hatrany ho mpiray tsikombakomba satria tra-tehaka niaraka tamin’ny fiara nitondra ilay fanamafisam-peo teny amin’ny manodidina an’Ambodifilao.
Ny lasa tsy fanadino …
Raha ny fitakian’ireto mpanentana ireto dia ny fialan’ny ministry ny serasera izay naman’izy ireo taloha ihany no anton’ny hetsika nataon’izy ireo. Araka ny filazany ihany dia manenjika azy ireo i Rolly Mercia satria « sahy milaza ny marina » izy ireo. Tsy fanadino anefa ny fanenjehana sy fankahalana mihoa-papana ataon’i Lalatiana Rakotondrazafy sy Fidèle Razara Pierre amin’ny Filoha RAVALOMANANA sy ny mpiara-dia aminy. Tao anatin’ny roa taona mahery nitoerany teo akaikin’i tgv sy nanaovany ilay fandaharana « anao ny fitenenana » tao amin’ny radio viva dia io fanenjehana ny Filoha RAVALOMANANA io no anton’asany. Na ny harivan’ny hetsika nataony aza dia mbola mitohy hatrany ny fanaratsiana ny Filoha na dia efa nodarohin’ny « namany » lakrimozena aza izy ireo.
Tokony am-pisainana hatrany no itondrana ny tolona fa tsy ho taitra randram-bao ny mpandala ny ara-dalàna ka hiantsampy amin’ny hazo boboka. Matetika ny hetsika toa ireny dia sinema entina hampisaraham-bazana sy handravana ny tolona hamerenana ny Filoha RAVALOMANANA. Ratsy ny « tonga namana vao mavomavo » saingy mila mitovy ny tanjona vao afaka miara-dia sy mifanotrona fa tsy hoe telo taona tsy mitsahatra manenjika fa rehefa matahotra hakatona sy hosamborina dia hoe « andao hiaraka » !